TAMAANDHO "KLUSHA" (SUUNKA SARREEYA): DABEECADA IYO SHARAXAADDA YAANYO KALA DUWAN, SAWIRRADA MIRO LA GOOYEY, SIDA LOO KORO BEERTA FURAN IYO AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO? - BEER CAGAARAN
Calaamadaha iyo sharaxaadda kala duwan ee yaryar ee caanaha Kluma, beerashada furan furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo, sawir miro
Tamaandhada "Klusha" waxaa si toos ah loogu yeeri karaa natiijo aad u fiican oo ku saabsan shaqada jadeecada gudaha.
Waxay soo jiidataa bannaanka u leh baadiyaha is haysta, halka beeraleyda waxaa lagu riyaaqay marxaladaha hore ee tamaandhaynta. Laakiin labadaba kuwa kale iyo kuwa kale waxay ku qoranyihiin tiro khaas ah oo miro ah oo gacmaha ku jira duurka dhirta.
Dheeraad ah ee maqaalka ah waxaan ka fekereyn doonaa sharaxan kala duwan ee tamaandhada, kuu sheegi sida loo koro yaanyadaas, waxa xun ee tiknoolojiyada beeraha kaa caawin doona si aad u hesho natiijada ugu fiican.
Yaanyo "Klusha": sharaxaad kala duwan
Magaca dugsiga Klusha
Sharaxaad guud Kala duwan yaanyo kala duwan oo yaanyo ah oo beeranaya beeraha lagu koriyo iyo dhulka furan.
Bisaylka 90-95 maalmood
Foomka Qaab-wareeg ah oo wareeg ah, oo leh dheeldheel yar.
Midab Khudaarta cagaaran waa cagaar khafiif ah, oo casaan (ama casaan casri ah ee noocyada labaad)
Cunto dhexdhexaad ah 90-110 grams, markaad ku shubto daboolka filimku gaari karo miisaanka 140-150 garaam
Codsiga Wanaagsan u ah isticmaalka cusub iyo ilaalinta.
Noocyo dhaadheer 1.8-2.2 kiilo garaam, oo ku saabsan 10.0-11.5 mitir labajibbaaran
Noocyada sii kordhaya Qiyaasta Agrotechnika
Cadaadiska cudurada Waxay leedahay iska caabin wanaagsan ee cudurada waaweyn ee dalagyada solanaceous.
Waxaa lagu gartaa Bisaylkiisa hore. Yaanyada cusub ayaa badanaa laga goostaa 90-95 maalmood kaddib marka la beero abuurka geedo sii kordhaya.
Nidaamka qiyaasta caadiga ah, dhererku kama badna 55-60 sentimitir. Ku saabsan fasalada aan caddayn ee halkan ka akhriso. Baaxadda yar ee baadiyaha waxay u ogolaataa 6-7 dhirta in lagu beeray halkii mitir oo labajibaaran oo ciid ah. Is-bahaysiga baadiyaha waxay suurtogal u tahay inay kobciso yaanyada Klusha xitaa balakoonka ku jira weel ama weel wax ku filan.
Wax soo saaraha ayaa loogu yeeray noocyo kala duwan oo casaan ah "Superklusha". On sharaxaad ka mid ah noocyo kala duwan ee yaanyo "Superklusha" waxaan ku noolnahay faahfaahin dheeraad ah, maadaama ay leedahay tiro tayo gaar ah. Isku day inaad eegto baadiyaha, waxaad si dhakhso ah u fahamtaa meesha uu ka yimid. Muuqaal ahaan, dhirtu waxay u egtahay digaag weyn oo leh baalalka ruffled, taas oo qarisay dhammaan digaagga hoostiisa.
Ka dib oo dhan, dibedda u sabab ah tiro badan oo caleemo ah ku dhowaad ma muuqato yaanyada la arki karo. Caleemaha waa mid dhexdhexaad ah, qaabka caadiga ah ee yaanyada, cagaar mugdi ah. Sida ay u koraan, inuu bannaanka u sheego saarista caleemaha on top of burushyada miraha la sameeyey.
In sharaxaad ka mid ah noocyo yaanyo Klusha, waxaa lagu tilmaamaa in ay ku habboon tahay in lagu beerayo dhammaan meelaha cimilada ee Russia. Waxay leedahay iska caabin wanaagsan ee cudurada waaweyn ee dalagyada solanaceous. Taasi waxaa lagu xaqiijiyay dib u eegis badan. Waxtarka ugu fiican ayaa la gaari karaa marka baadiyaha ay ku koraan 2-4 afkoda. The afkahani waa mid aad u awood badan, oo, garsoore by sharaxaad, yaanyo Klusha uma baahnid in lagu xiro.
Laakiin, sida laga soo xigtay dib u eegista laga helay bannaanka, waxaa fiican in lagu rakibo taageerooyin khafiif ah oo ku wareegsan baadiyaha, taas oo u oggolaanaysa in geedka aan la dagin dhulka. Sida laga soo xigtay talooyinka la helay, geedka uma baahna qanjaruufo.
In sharaxaad ka mid ah yaanyada Klusha, qaybaha cas ee-casiir la siiyey, kaliya midabka kala saaro yaanyada Super Klusha. Dalka dalagyada - Ruushka. Miraha waa qaab isku mid ah, oo leh dheelitir yar. Tamaandhada aan caleemaha lahayn waa cagaar khafiif ah, oo casaan (ama casaan casaan ah ee noocyada labaad). Miisaanka celceliska: 90-110 garaam, markaad soo degto daboolka filimku wuxuu gaaraa miisaan 140-150 garaam.
Iyo miiska hoos ku qoran waxaad ka heli doontaa astaamahan sida miisaanka miro ka soo noocyo kale oo yaanyo ah:
Magaca dugsiga Miisaanka miisaanka (grams)
Jalandha qajaje 150
Golden Flaming 85-100
Dhamaan isticmaalka cusub, iyo xajmiga xajmiga ayaa wanaagsan marka la diyaarinayo xilliga jiilaalka. Wax-soo-saarka: 1.8-2.2 kiilo oo duurka ah, qiyaas ahaan 10-11.5 mitir labajibbaaran. Tamaandhada waxaa lagu kala soocayaa bandhig fiican, waxay si fiican u dulqaadanayaan gaadiidka iyo kaydinta gaaban.
Sida for dhalidda ee noocyo kale, waxaad ka heli doontaa macluumaad this miiska:
Magaca dugsiga Yield
Klusha 10-11.5 kg halkii mitir labajibbaaran
Mooska casaan 3 kg mitir labajibbaaran
Nastya 10-12 kg mitir labajibbaaran
Olya la 20-22 kg mitir labajibbaaran
Dubrava 2 kg oo baadiyaha ah
Wadanka 18 kg halkii mitir labajibbaaran
Sannad dahab ah 15-20 kg halkii mitir labajibbaaran
Spam Pink 20-25 kg mitir labajibbaaran
Diva 8 kg oo baadiyaha ah
Yamal 9-17 kg halkii mitir labajibbaaran
Wadnaha dahabka ah 7 kg mitir labajibbaaran
Waxyaabaha kala duwan ee kala duwan:
Bush baadiyaha oo hooseeya.
Macaawin si looga saaro tallaabooyinka.
Jiritaanka guud ee isticmaalka miraha.
Cadaadiska cudurada waaweyn ee yaanyada.
Ku habboon goobaha cimilada ee Russia.
Xaaladaha aan la aqoonsan, marka laga reebo tiro badan oo caleemo ah.
Sidoo kale akhri boggayaga internetka: sida loo helo dalagyo wanaagsan oo tamaandhir ah oo ku yaal banaanbaxa furan iyo sanadka oo dhan lagu koriyo jardiinooyinka.
Iyo sidoo kale, siraha ee kala duwan ee beeraha hore ama sida loo daryeelo yaanyada oo si dhakhso ah Bisaylkiisa si sax ah.
Oo hadda waxaan ku baaqaynaa in la eego kala duwanaanta yaanyada ee Kluma ee sawirka hoose.
Noocyada sii kordhaya
Si loo fahmo sida loo kobcinayo yaanyada Klusha, geedi socodka waa in loo qaybiyaa dhowr tallaabo oo muhiim ah:
xulashada iyo sameynta abuurka caafimaadka leh;
beeritaanka biqilka on geedo;
geedo soo qaado;
ka soo degay cawska diyaaradeed;
daryeelka iyo quudinta geedi socodka koritaanka.
Waxay u qalantaa faahfaahin yar oo ka mid ah qaybahan muhiimka ah.
Haddii loogu talagalay beerista yaanyada "Klusha" geedo waa laga qaadaa dhulka beerahooda khudradeed, ka dibna waa lagama maarmaan in ciidda la nadiifiyo. Xulashada ugu fudud waxay tahay waraabinta manganese. Xalka waxaa loo diyaariyaa heerka halbeeg oo ah kareemka potassium halkii laba litir oo biyo ah.
Carruurta diyaarka ah ayaa daadi kara xalka diyaarinta. Xulashada ugu fiican waxay noqon kartaa ciidda ka soo rididii, kuwaas oo la koray zucchini, digirta, karootada, dhir. Waxaad isticmaali kartaa substrate-ka lagu iibsanayo dukaanka khaaska ah, kiiskan, hawlaha dheeraadka ah looma baahna. Sida loo diyaariyo ciidda aqalka dhirta lagu koriyo ee guga, halkan ka akhri.
Xulashada iyo sameynta abuurka
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu dooran karo miraha buuxa waa sida soo socota. Seeds waxay ku seexdaan saline (qaado oo ku jira galaas biyo ah). Ka saar miraha kor u kacaya, raaci hoosta iyo daadi.
Ka hor inta biqilka, pickle abuurka ee xal manganese ah ama daroogada "Wirtan-Micro". Miro la daweeyey waxaa lagu meeleeyaa faashad qoyan biqilka. Si taxadar leh ula soco qoyaanka, ha u oggolaanin in faashadda lagu qalajiyo. Sidoo kale, qoyaanka xad dhaafka ah laguma talinayo.
Ogow! Xulashada habboon ee lagu beeri karo yaanyo caanaha Klusha waa isticmaalka weelasha caagagga leh godadka horay loo qoday si biyo u fiican.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa mini-gaari oo gaar ah. Landing waxaa lagu talinayaa in koritaanada ee qoto dheer oo ah 1.0-1.5 sentimitir. Ku daadi carrada dusha sare, keena qoto-dheeraha abuurka ilaa 2.0 sentimitir, si khafiif ah u jajab dhulka, ku shub biyo heerkulka qolka. Ku dabool sanduuqa leh filim ama galaas, meel meel diiran, oo iftiin leh. Ka dib muuqaalka jeermiska, ka saar dhalada. Dareenada ayaa loo isticmaali karaa si loo dedejiyo geedi socodka kobcinta.
Geedo doog ah
Waqtiga koritaanka 2-4 caleemo run ah, waxay soo qaado geedo, iyaga ku beeray weelal gooni ah. Waxay u adeegi karaan sida koobab peat ah, ka jar bacaha ka juice. Goobta ayaa la qaadaa iyadoo la socota godad carrada. Ka dib markii la qaato maalmo dhowr ah, waa in dhulka la daadiyo.
Ka dib markii la rujin, geedo waxaa la dhigaa meelo iftiin leh koritaanka dheeraad ah.. Geedaha loogu talagalay beeritaanka waxay dhumucdiisu ka kooban tahay 8-9 millimitir, dhererku wuxuu gaadhi karaa ugu yaraan 20 sentimitir oo leh caleemo caano leh oo wanaagsan.
Dhulka saaran godka ayaa horay loo diyaariyey. Waa suurad wacan in lagu bilaabo humus, ash alwaax, qudhuntii ugu yaraan muddo bil ah balka. Ku dhufo qoto dheer ee waraaqda xayawaanka, u diyaari godadka. Ka hor inta aan la beeri, god kasta waa la daadiyaa barket biyo diirran.. Kala soocid noocyo yaanyo ah "Klusha", oo la siiyay dhererka yar ee baadiyaha, oo aan la aasin.
Ka tagista, dharka sare, waraabinta
Marka geedi socodka koritaanka, geedo lagu beeray ceelasha waxay u baahan yihiin in lagu waraabiyo biyo diirran, kaas oo la qabadsiiyo qorraxda ka dib si looga fogaado gubashada caleenta inta lagu jiro maalinta. Weedhintu waa lagama maarmaan, loosinta ciidda. Mulching waa gargaar fiican ee xakamaynta cawska. Ugu yaraan labo jeer muddada koritaanka iyo dhirta, dhirtu waxay u baahan yihiin in la buuxiyo bacriminta macdanta oo buuxa.
Sida bacriminta for yaanyada, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa:
Sida horey loogu soo sheegay, noocyada kala duwan ayaa ka horjoogsanaya cudurada waaweyn ee dalagyada solanaceous. Si kastaba ha ahaatee, macluumaadka ku saabsan cudurrada ugu caansan ee yaanyada ee lagu koriyo iyo tallaabooyinka looga hortago iyaga ayaa laga yaabaa inay adiga waxtar kuu lahaan karaan.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan Alternaria, Fusarium, Verticillia, Blight iyo sida looga hortago. Iyo sidoo kale ku saabsan noocyo aan saameeyeen dabaylo goor dambe, adkeysi ugu cudurada iyo awoodaan waqti isku mid ah si ay u siiyaan goosashada wanaagsan.
Ku beeray goobta dhowr yaanyo duurka ah "Super Klusha" ayaa ku siin doona midho dhadhan leh oo ku habboon isticmaalka cusub oo si fiican u habboon dhammaan noocyada goosgooska jiilaalka.
Jaantuska hoose waxaad ka heli doontaa links ku saabsan qoraallada wargelinta ee ku saabsan noocyo yaanyo leh shuruudaha kala duwan:
Aad u fiican Hore u bislaaday Gaar ahaan hore
Hooyo badan Samara Torbay
Ugu dambeyn f1 Jacaylka hore Boqor dahab ah
Riddle Tufaaxa barafka King london
Buuxinta cad Sida muuqata aan muuqan Pink Bush
Alenka Jacaylka Dunida Flamingo
Fekrada Moscow waa f1 Jacaylkayga f1 Dabeecadda qarsoodiga ah
Debut Waa mid weyn New königsberg
Daryeelka Apple ee dayrta
Dhirta dhirta cawska dhexdhexaad ah